Muongorori anoti iyo Bata ID yeiyo iPhone 7 ichave inobata | IPhone nhau
Muongorori anotendawo kuti iyo ID yekubata yeiyo iPhone 7 ichave inobata
Zvinotaridza kuti makuhwa ari kusvika kwatiri avhareji yeimwe pazuva. Nhasi makuhwa anouya kwatiri kubva kuzivisa kubva kune muongorori kuCowen nekambani, uyo, achidana "masosi ari mumunda," anovimbisa kuti Apple icharega kushandisa iyo Bata ID isu takashandisa kubvira 2013 uye pachinzvimbo inoshandisa imwe capacitiveNdokunge, bhatani repamba risingazoregi uye richizara chose nepamberi pepaneru.
Chikumi 15 tinoburitsa iyo inonzi yakadonha iyo yaitaridza yaitaridzika kunge iPhone yakasiyana neyaimboitika kare ne tanga bhatani «rakavezwa» kumberi kwepaneru, izvo zvakaita kuti tifunge kuti kushandisa iro rinofungidzirwa kutanga bhatani isu taifanira kuzviita nekuisa munwe wedu pairi, tisinganyura. DigiTimes, uyo akafanana naCowen neKambani vane mwero wekubudirira wakasangana, akataura zvakare mwedzi uno nezve mukana uyu achivimbisa kuti iyo iPhone 7 ichave isina mvura uye isina guruva.
Iyo iPhone 7 inogona kuve ne "Force Touch ID"
Parizvino, ruzivo urwu ingori runyerekupe, asi iwe uri kutofungidzira kuti izvo kusvika parizvino zvinonzi "Force Touch ID" zvinoshanda sei. Zvingangodaro zvaive chikamu chepamberi pepaneru uye chaishanda uchishandisa tekinoroji 3D Touchndiko kuti, zvinoenderana nesimba ratinodzvanya bhatani, richaita chiitiko chimwe kana chimwe, pamwe kusvika pamakumi mashanu emadhindaini akasiyana. Kana iwe ukashandisa 5D Kubata, panofanirwa kuvewo neiyo taptic mhinduro kutizivisa isu kana tashandisa simba rinodiwa.
Zvingave zvisinganzwisisike kwandiri kuona iPhone ine bhatani repamba risinganyure mukati, asi zvakare zvinoita sezvisinganzwisisike kwandiri kuti hapana kumberi kwepaneru kwechigadzirwa kwakabuda. iPhone 7 kupfuura yatakaburitsa muna Chikumi 15. Chero zvazvingaitika, iyi runyerekupe rune tariro kune avo vese vasingade kunyudza bhatani repamba mazana ezuva pazuva nekuti, seni, vanofunga kuti tinogona kupedzisira tazvityora. Izvo zvataurwa, zvingangoita here kuti kusavapo kwekudonha kubva kuchinhu ichi kunoreva kuti pachave nekunyatso kumanikidza kutanga photon?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Muongorori anotendawo kuti iyo ID yekubata yeiyo iPhone 7 ichave inobata
Ini ndinofunga mutsauko hauzove unoonekwa sezvazvinoratidzika. Ndiri kureva, ndinofungidzira kuti inozopedzisira yaita senge matsva trackpads, ayo ari zvakare akasununguka zvakanyanya, nenzira.
Mhoro kune creaks. Kana chete
Nyowani yakajeka Shot pane iPhone mushandirapamwe
Tamba Vavaki mahara kwenguva pfupi